China Automatic ụmụaka nkpuchi igwe factory na-emepụta | Idocha
Automatic ụmụ nkpuchi igwe
Ihe nkpuchi umuaka zuru ezu na igwe di iche iche di iche iche di iche iche emere maka ndi ahia ka ha meputa ihe nkpuchi Japanese. Ọ na-eji 1 ~ 4 n'ígwé eyi spunbonded na-abụghị kpara akwa, arụ ọrụ carbon na filtration ihe dị ka nri ihe. Ihe nkpuchi ahụ bụ teknụzụ ultrasonic. Ihe nkpuchi nwere ihe doro anya, ịgbado ọkụ siri ike na ọsọ ọsọ, nke na-ezute ihe achọrọ maka arụmọrụ ngwaahịa. Nzube nke nkpuchi ahụ kwekọrọ na ụkpụrụ nyocha nke Europe na America, yana ịrụ ọrụ akpaka zuru oke. Igwe ahụ dum nwere ihe eji emepụta ihe, na-akpụ, ngwongwo ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ na akụkụ ndị ọzọ. Igwe akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa nwere ike ịmepụta masks enwere ike iwepụ, mana ọ bụghị N95 na masks stereo.
Ma nkpuchi ahụ bụ ahụike enweghị ihe jikọrọ ya na igwe. Ihe nkpuchi nke akụrụngwa a mepụtara nwere ike iji ya mee ihe maka ịwa ahụ ma ọ bụrụhaala na ọ na-egbu ya. Igwe a na - ejide njikwa ihuenyo mmetụ PLC. A na-ebugharị belt ahụ na-ebu isi site na otu moto, na-agbanye moto ahụ, nnyefe ya ziri ezi, njikwa na-adịgide adịgide, a na-agbanwekwa ọsọ ahụ.
Akụrụngwa atụmatụ ：
1, ịgbado ọkụ mmetụta dị mma na odida ọnụego bụ ala;
2, The mmepụta ọsọ bụ oru oma, na 80-100 mbadamba kwa nkeji, nke ike-emepụta nọgidere maka awa 24;
3, Computer PLC mmemme njikwa, servo mbanye, nnukwu ogo nke akpaaka;
4, Enyi na enyi igwe-interface, ndiiche akụrụngwa na ụkọ mkpu, ihuenyo nduzi obibi ndiiche ngwa ngwa.
Aha ngwaahịa akpaka ụmụaka nkpuchi igwe Nha akụrụngwa L3600xW3500XH2000 （mm）
Ngwaahịa ngwaahịa SYK-650B nsogbu 5 ~ 8kg / cm²
Na-arụ ọrụ ike ọkọnọ
Ngwa akụrụngwa 2700W
mmepụta arụmọrụ 50 ~ 70pcs / nkeji Akụrụngwa ibu ≤3000kgIhe dị ka ≤ 3000kg
Ndepụta nke ejiji ejiji
Bridge nke imi cutter
1 Ọnwa 3
2 Ọnwa 3
Lug ịgbado ọkụ n'isi
4 Ọnwa 3
2 Ọnwa isii
Hummer belt mobile eriri
3 Ọnwa 3
Okwu mmalite nke rectifiers (nhọrọ)
Igwe ala igwe bụ usoro mmezi nke servo nke arụ ọrụ zuru oke ihuenyo mmetụ. Ọ na-akpan iji soro ihe onwunwe onu, akara akara na iche ogo. Okwesiri ka okwesiri ikpochapu ihe di iche n’etiti ihe ndi ozo. Mgbanwe nke ihe a na-agbakọ ultrasonic, infrared na CCD sensọ, nsonaazụ ya na-agbakwa site na nsonaazụ. A na-eji moto ahụ na nzaghachi koodu ahụ iji dozie ihe na-edozi ahụ n'ụzọ ziri ezi, nke a na-ejikarị eme ihe maka akara nhicha akwa nhicha na-adịghị edozi, mbipụta akwụkwọ mgbanwe, akpa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
1.servomotor onwe-mmụta: mbụ na-amalite igwe n'ime akwụkwọ ntuziaka ala, na-emetụ mode "usoro parameters mwube mgba ọkụ isi" n'ime usoro kwa ka ndị isi interface, pịa "akpaka ọrịa strok njirimara button" na-amalite site na-amụta. Moto ahụ ga-aga ihu na azụ, ma mụta ibu na ọrịa strok ahụ na-akpaghị aka, iji wee nweta steeti kacha arụ ọrụ. Mgbe emechara ya, onye nchịkwa ahụ ga-alaghachi na steeti "ntuziaka".
2.manual ala pịa "aka ekpe" igodo, mezie ndiiche ga-akpali ekpe, pịa "nri" igodo, mezie ndiiche ga-akpali nri, ma ọ bụrụ na direction abụghị, nwere ike pịa "usoro oke set mgba ọkụ isi" igodo ịbanye "usoro oke mwube nna ukwu interface ", pịa" bọtịnụ setịpụrụ moto "iji buru mgbanwe mgbanwe aka aka, wee pịa" bọtịnụ mwepụ ntọala "iji kwụsị, Mgbe ahụ agbanweela ntuziaka ntuziaka.
3.enter na "akpaka mgbazi" ala, chọpụta ma na akpaka direction ziri ezi, ma ọ bụrụ na direction na-abụghị, ịgbanwee na "ntuziaka mgbazi" ala, dị ka "ka akpaka ala moto nti na-adịghị mma uzo polarity" mgba ọkụ moto direction, mgbe ahụ a ga-agbanwe okporo ụzọ na-akpaghị aka.
4.this usoro mmezi nwere ike na-agba ọsọ nke ọma, enwere ike ịhazi "ntuziaka ntuziaka" steeti site na "sistemụ usoro iji gbanwee bọtịnụ" na "sistemụ ntọala ntọala ntọala interface" Enwere ike gbanwee ihe kwekọrọ na ya, na nhazi nke uche ọ naghị atụ aro ka ọ buru ibu ma ọ bụ pere mpe.
Ọrụ dị ogologo:
1 Ihe nkwụsị ihe: Ọrụ a dị na "akpaaka". Mgbe ihe ahụ mebiri na mberede ma ọ bụ mechaa na-agba ọsọ, mgbazi ahụ agaghị agba ruo n'isi ruo ọgwụgwụ, mana ọ ga-egbu oge maka oge (enwere ike ịtọ oge igbu oge). Njikwa ntọala interface ka atọrọ "On" mgbe ihe ebipụ.
2 mpụga nchịkwa: ọrụ a na-achịkwa "akpaka" na "akwụkwọ ntuziaka" na-agbanwe site na akara ndị dị na mpụga, mgbe "akpaaka" na "COM" nwere njikọ dị mkpụmkpụ, Gbanwee na "akpaka" wee gbanwee "ntuziaka" mgbe a kwụsịrị. Njirimara a na-enyere mgbazi mmezi ka ịgbanwee gaa na "akpaka" ka ngwaọrụ ahụ na-agba ọsọ, na-akwụsị ịgbanwere ya na "ntuziaka" ma nwee ọgụgụ isi. Ọrụ a kwesịrị ka a chịkwaa ya na ntanetị njikwa ntanetị.
3 Oti mkpu: ọrụ a dị na mgbazi nke omume nke oke, bufee, karịa ugbu a na ọnọdụ ndị ọzọ, a ga-emechi agba anọ iji nye akara nkwụsị na mpụga.
Mmejọ ndị a na-ahụkarị na Ihe Odide Ntụkwasị na Ngwọta Ha
1.Enweghị echiche ọ bụla mgbe ike gasị, na ngosipụta ahụ anaghị enwu gbaa Lelee na mmepụta DC24V nke ike ọkọnọ bụ ihe nkịtị, lelee ma eriri ọkụ dị mma, ma nkwụnye ọkụ dị na kọntaktị dị mma, yana njikọ ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị, wee pịa ya ọzọ.
2.Mbanye enweghị ike ịkwụsị oke ọnọdụ
1) .chelee ma ọ bụrụ na njikọ ahụ ziri ezi na nkwonkwo ya na ezigbo kọntaktị, plọg ma dọrọ ọzọ
2) .N'ihi na "usoro oke ntọala mbanye mgba ọkụ", na ntuziaka mgbazi mode na-akpali n'ime usoro oke mwube isi interface, na pịa "akpaka ọrịa ude isi" na-amalite onwe-amụta. Na servo moto bụ onye na - amụ ihe. Lelee ma enwere mgbanwe ọ bụla na uru nke eserese mmanya na ọnọdụ ngosi ngosi.
3.thegbọala anaghị arụ ọrụ
1) .chele ma njikọ ma ọ bụ synchronous pole bụ rụrụ ma ọ bụ eriri na-agbajikwa
2) .Ekewapụ mbanye si ogbe na-elele ma ọ bụrụ na n'ibu akụkụ bụ rapaara ma ọ bụ na draịva nzube ezughị.
4. Mbanye na-arụ ọrụ aka na akpaghị aka naanị na otu ụzọ
1) .Colee ma ihe ntanetị ahụ ziri ezi.
2). Jiri ihe ahụ iji gbochie ihe mmetụta ahụ iji hụ ma ị nwere ike ịgbanwe ụzọ, ọ bụrụ na ị nwere ike, gbanwee polarity ga-adị mma
3) .Chelee iji hụ ma eriri ihe mmetụta adịghị ma ọ bụ agbaji.
4) .Choolee ihe nhoputa ihe ziri ezi?
Ultrasonic AE-210 kwesịrị ekwesị maka ihe niile na-enweghị ntupu
Infrared AE-100 adabara maka ihe nwere ntupu (rịba ama na enweghị ike itinye ya na ìhè anyanwụ)
Agba ọkọlọtọ optoelectronic AE-90 kwesịrị ekwesị maka ịgbaso agba na ngwa ngwa dị ala
Ihe oyiyi CCD AE-400 dabara adaba maka ihe dị n'etiti na nke dị elu, dị ka ọnụ, akara, agba, wdg.
5) .Driver jitter dị oke oke. Usoro nhazi: A bara uru uru na interface ntọala uru.
5 Rectiting ala azụ na-apụta siwing nnukwu ma ọ bụ enweghị mmetụ: lelee ma ihe ileghara na mpịakọta, nwere ike dịkwuo erughị ala ma ọ bụ dịkwuo esemokwu nke mpịakọta; enwere ike gbanwee; ihe mmetụta nwere ike ịdị nso dị ka o kwere mee na swing roll; Lelee ọdịiche dị n'etiti onye ọkwọ ụgbọ ala na akụkụ igwe.
6. Isi ihe ngwaọrụ anaghị arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ na-amaliteghị ma ọ nweghị ike ịrụ ọrụ mgbe mmalite
1) .Manual ala occlusion mmetụta, ngosipụta ndiiche ndiiche na njikwa, mmanya ọgụgụ uru abawanye
2). lelee ma enwere ikike nnyonye anya dị elu n'akụkụ njikwa na ihe mmetụta, ịnọrọ ma weghachite
3) .Jikọọ akụrụngwa na eriri ala nke ngwaahịa a
4) .Chọpụta ma eriri na eriri USB dị n'akụkụ akara moto dị elu, biko kewaa ule ahụ
5) .Colee ma eriri agbajiri roba ma ọ bụ kọntaktị ọjọọ
6.) heck ma ọ bụrụ na V- na Pee dị mkpụmkpụ
7.Material electrostatic bụ karịsịa nnukwu: ihe mmetụta na onye na-ahụ maka ihe ntanetị na ntanetị, ihe mmetụta dịka o kwere mee rapara n'etiti ihe ahụ, ọ kachasị mma ịgbakwunye akụrụngwa mkpochapu electrostatic.
Nke gara aga: Duck ọnụ nkpuchi igwe
Osote: Ọrụ na njirimara nke igwe nkpuchi azu
Anti Static Afọ Cloth, Nkpuchi Manufacturer, Packaging Afọ akpa, Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe, Igwe nkpuchi ihu, Uhie Uhie Uhie,